Bileyska magaalada Galkacyo oo xabsiga u taxaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Geesay. [Akhris …] – Radio Daljir
Bileyska magaalada Galkacyo oo xabsiga u taxaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Geesay. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 25- Ciidamada ammanka ee magaalada Galkacyo ayaa xabsiga dhigay guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug C/nuur Maxamed Diiriye ?Geesay? kadib markii ay xalay sameeyaan howl-gal ballaaran oo lagu adkaynayey ammaanka magaalada.
Guddoomiyaha la xiray ee Geesay, ayaa lagu eedaynayaa in ku lug leeyahay falal dhan ka ah xagga ammaanka uu muddooyinkii ugu danbeeyey ka dhacayey gudaha magaalada Galkacyo, gaar ahaan dilkii wasiirkii warfaafinta Puntland iyo nin ay isku hayb-yihiin oo isna shalay galinkii danbe lagu toogtay bartamaha magaalada.
Guddoomiyaha ayaa loo dhaadhiciyey Xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo, kadib markii saqdii dhexe ee xalay laga soo qabtay guriga uu ka deggan-yahay magaalada Galkacyo, waxaan haatan socda su?aalo ay bileysku weydiinayaan oo ku saabsan waxa uu ka ogaa falal lagu eedaynayo.
Saraakiisha ciidanka bileyska Puntland oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay xarigga guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug, ayaa ka gaabsaday in ay faah-faahin dheeraad ah bixiyaan, waxayna tilmaameen in uu jiro baaritaan la xiriira falalka guddoomiyaha lagu eedaynayo oo hadda socda markii baaritaankaasi dhammaadana la heli doono sababta xariggiisa.
Xarigga guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug C/nuur Maxamed Diiriye ?Geesay? ayaa yimid kadib markii maalintii shalay ahayd bartamaha magaalada Galkacyo lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ay isku qooys ka soo jeedaan wasiirkii la dilay ee warfaafinta Puntland Warsame Cabdi Shirwax ?Seefta Bannaanka?.
Waxaana la tilmaamayaa dilkaasi in uu gaystay wiil uu dhalay guddoomiyaha maanta la xiray, iyadoo horayna Geesay loogu eedaynayey in uu lug ku lahaa dilkii wasiirka, inkastoo arrintaasi uu iska fogeeyey, isla markaana uu sheegay in ay tahay been aan sal iyo raad toona lahayn.
Dadka indha indheeya arrimaha ammaanka, ayaa qaba falalkaan is daba-joogga ahi in ay yihiin kuwo lagu carqaladaynayo nabad-galyada Puntland, waxaana ay tilmaamayaan in aysan ka marnayn siyaasad ka baxsan Puntland oo lagu doonayo in lagu jaahwareersho shacabka iyo dawladaba.